Guusha England Oo Caddaadiska Ku Sii Kordhisay Tabobaraha Scotland
HomeWararka MaantaGuusha England Oo Caddaadiska Ku Sii Kordhisay Tabobaraha Scotland
Tabobare Gareth Southgate ayaa talaabo hore ugu sii qaaday dedaalka uu ku doonayo in loogu magacaabo tabobaraha rasmiga ah ee xulka England, siina kordhiyey cadaadiska saaran macalinka xulka Scotland, Gordon Strachan kadib markii uu guul qurux badan, ciyaar isreeb reebka koobka aduunka ah kaga tirsaday geggida Wembley.
Southgate guusha uu gaadhay waxay xaqiijisay inuu yahay tabobarihii ku haboonaa inuu xilka kala wareego Sam Allardyce, shaqadiisana joogto rasmi ah loogu bedelo, waxaanay xulka England soo bandhigeen, ciyaar aan si fudud loo dhayalsan karin, si fududna u kala jartay qaranka Scotland.
Daniel Sturridge goolkii uu shabaqa ku qaboojiyey, ee ku yimid madaxa uu kubbada ku qaloociyey, daqiiqadii 24 aad ee bilowga ciyaarta iyo midkii uu saaxiibkiisa Liverpool ay ka wada tirsan yihiin ee Adam Lallana sidii si lamid ah uun ugu qabtay kubbadii uu soo gaadh siiyey Danny Rose shandaqiiqo kadib markii nasashada laga soo noqday, ayaa guusha hoosta uga xariiqay qaranka Ingiriiska.
James Forrest iyo Robert Snodgrass ayaa xulka martida ahaa ka lumiyey fursadihii ugu fiicnaa, ka hor intaanu Lallana goolka labaad England u dhalinin – Waxaanu ahaa madaxii Gary Cahill ku xareeyey kubbadii koornaha ahayd ee uu Wayne Rooney soo ganay ta sii laban laabtay mashaqada tabobare Strachan.
England imika waxay fadhidaa figta ugu saraysa ee Group F halka Scotland ay u dhaadhacday kaalinta shanaad ee hormadan, qirin-qiirna ay ku jirto fursadii ay kaga mid noqon kareen xulalka u gudbaya tartanka koobka aduunka 2018 ka Russia marti gallin doonto.